Muxuu Baybalka ka dhahay sakada Kirishtaanka?
Su’aal: Muxuu Baybalka ka dhahay sakada Kirishtaanka?
Jawaab: Kirishtaan badan waxay la dhibaatoodaan arinta sakada. Kaniisadaha qaarkood waxay siinayaan xoogsaarista badan. Isla waqtigaas, Kirishtaan badan way diidaan inay u gudbiyaan digniinada baybalka ee ku saabsan wax u bixinta Illaah. Sakada/siinta waxaa loogu talo galay inay raaxo tahay iyo doco. Si murugo leh, taasi mararka qaar ma ahan xaalada kaniisada maanta.
Sakada waa aragtida Baybalka Hore. Sakada waxay aheyd sharuuda Sharciga ee Yahuuda ay siinayaan boqolkiiba 10 ee badarka u baxo iyo xoolaha ay koriyaan ee kulanka/kaniisada (Laawiyiintii 27:30; Tirintii 18:26; Sharciga Kunoqoshadiisa 14:24; 2 Taariikhdii Kowaad 31:5). Xaqiiqda, Sharciga Baybalka Hore wuxuu u baahanyahay sako badan—mid oo loogu talo galay Levites, mid oo loogu talo galay isticmaalka kaniisada iyo idaha, iyo mid oo saboolka deegaanka—taas oo riixeyso guud ahaan qiyaastii boqolkiiba 23.3. Qaarkood way fahamsanyihiin sakada Baybalka Hore sida qaab canshuur ee siineyso baahida wadaadada iyo Laawiyiintii ee nidaamka ala bariga.
Baybalka Cusubma jiro meel u ku amrayo, ama xittaa ku taliyo, in Kirishtaanka ay gudbiyaan nidaamka sakada sharciga ah. Baybalka Hore ma jiro meel loogu talo galay boqolkiiba daqliga qofka ee dhinac loo dajinayo, laakin kaliya wuxuu dhahaa hadiyadaha waa i “lagu joogteeyaa daqliga” (1 Korintos 16:2). Qaar ka mid ah kaniisada Kirishtaanka waxay qaateen boqolkiiba 10 ee torada ka imaaneyso sakada Baybalka Hore oo lagu isticmaalo sida “ugu yaraanta lagu taliyay” ee Kirishtaanka ee siintooda.
Baybalka cusub wuxuu ka hadlaa muhiimada iyo faa’idooyinka siinta. Waxaan u siineynaa sida aan awoodno. Mararka qaar taasi micnaheeda waa wax ka badan boqolkiiba 10; mararka qaar taasi waxay micnaheeda noqon kartaa siinta wax yar. Waxay dhammaan ku xirantahay kartida Kirishtaanka iyo baahiyada jirka ee Kirishtaanka. Kirishtaan walba waa inay si dadaal badan u dugtaan oo u raadiyaan xigmada Illaah ee xaalada ka qeybqaadashada ee sakada iyo/ama inta la siinayo (Yacquub 1:5). Kuwa kore oo dhan, dhammaan sakooyinka iyo siinada waa in lagu bixiyaa ujeedooyin saafi ah iyo aragtida aaminaada ee Illaah iyo adeega jirka Kirishtaanka. “Nin walba waa inuu siiyaa waxa uu go’aansadayqalbigiisa inuu siiyo, ma ahan meermeerinta ama sida waafaqsan qasabka, Illaah wuxuu jacelyahay siiye farxada wax ku bixiyo” (2 Korintos 9:7).